एनएमबी माइक्रोफाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ७ माघ २०७५)
एनएमबी बैंकको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेको एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले गत आव समेतको मुनाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव पुस २९ गतेको साधारणसभाबाट पारित गरेको छ । गत वर्ष २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको यस कम्पनीले यस वर्ष भने लाभांश घटाएको छ । अघिल्लो आवमा रू. ४ करोड ५४ लाख २ हजार मुनाफा गरेको यस कम्पनीको गत आवमा भने रू. ३ करोड २७ लाख ६ हजार मात्र नाफा भएको छ । नाफामा कमी आएकाले यस वर्ष लाभांश घटेको देखिन्छ ।
यो कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी १ सय २५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभाबाट पारित गराएको छ । हाल रू. १६ करोड २० लाख ६ हजार चुक्तापूँजी रहेको यस कम्पनीको हकप्रदपछि रू. ३६ करोड ४५ लाख १३ हजार पुग्नेछ । यस कम्पनीले ५४ ओटा जिल्लामा १ सय शाखा तथा उपशाखा कार्यालय मार्फत ८७ हजार ५ सय ९५ विपन्न घरपरिवारमा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
2019-01-21 - 173 view(s) - abhiyan